Internet ရဲ့ လက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » Internet ရဲ့ လက်ဆောင်
Internet ရဲ့ လက်ဆောင်
Posted by etone on Oct 27, 2011 in My Dear Diary | 18 comments
Internet ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်း ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရောတဝင်ရှိနေခဲ့တာ ကောင်းတဲ့ တိုးတက်မှုပါပဲ ။ လွန်ခဲ့တဲ့… ခြောက်နှစ်လောက်ကစလို့ …. တရိတ်ရိတ် တိုးတက်လာတဲ့ အင်တာနက်သင်တန်းတွေ ၊ အင်တာနက်ဆိုင်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့ပေးမှုနဲ့ … အသုံးပြုသူ ဦးရေ များသည်ထက်များလာခဲ့တယ် … ။ ဘာသင်တန်းမှ မတက်ပဲ အင်တာနက်ကို အလကားရလို့ …လက်ဆော့သုံးရင်း သုံးတတ်သွားတဲ့ ကျွန်မလို လူတွေလည်း ရှိပါတယ် … ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် … နည်းပညာကို အသုံးပြုသူတွေ များသထက်များလာခဲ့ပါတယ် … ။ ကမာ္ဘအရပ်ရပ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆို အင်တာနက်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်အသုံပြုနိုင်လျှင် ဝေးဝေး နီးနီးဆုံတွေ့နိုင်တာကလည်း အင်တာနက်ရဲ့ အားသာချက်ပဲပေါ့ … ။ ဒါ့ပြင် ကိုယ်မသိသေးတဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေ ၊ အကျီ င်္ ဒီဇိုင်းတွေ ၊ လက်သည်းခြေသည်း ပုံဖော်နည်းတွေ ၊ အသုံးဆောင် အပြင်ဆင်တွေကစလို့ ….စာအုပ်စာပေ ၊ တက်ကြမ်းတွေကအဆုံး လေ့လာသင်ယူချင်တာမှန်သမျှ လိုသလိုရှာလို့ရနေတဲ့ အင်တာနက်ကြီးကို လှိုက်လှိုက်လဲလဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ….. ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မသိဘူး … ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာတော့ … အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်းနီးပါး ချက်တင်နဲ့တော့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ဖူးကြလိမ့်မယ် …. ။ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖန်တီးမှု ပညာရပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသူအချင်းချင်း … တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အရုပ်မမြင်ပဲ စာရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ ချက်တင်လေးကို စွဲလန်းခဲ့သူများလည်း ရှိခဲ့ဖူးတယ် …… ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ….. နေကောင်းလားမှ အစပြုပြီး … ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်ပင်ပေါ် တိုင်ပင်ဖက်အဖြစ်ပါ ချက်တင်ကို ကြားခံ အသုံးပြုခွင့်ရတာကြောင့် အထီးကျန်ချိန်တွေ မရှိသလောက်ပါပဲ …. ။ တစ်စတစ်စ တိုးတက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဗွီဒီယိုချက်တင်ဆိုတာမျိုး ခေတ်စားလာပြန်တယ် … ။ ကော်နက်ရှင်ကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ရုပ်ပါကြည့်ပြီး နှစ်ဖက် စာရိုက် ၊ စကားပြောလို့ရတဲ့ …. VZO, Skype တို့လိုမျိုးတွေပေါ့ … ။ တစ်ချိန်လုံး ကိုယ်နဲ့ ချက်တင်ပြောခဲ့တဲ့ လူရဲ့ မူလရုပ်သွင်ကို မြင်ရတဲ့အခါ …. ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုတိုးလာသလို ၊ ဆက်ဆံရေးတွေ ပိုဆိုးသွားတာတွေလည်း … ကြားခဲ့ဖူးတယ် … ။ စာရိုက်တာမှာ အရေးသား ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ၊ စကားပြောတဲ့အခါ အသံဘယ်လောက်ချိုချို … တစ်ခါတစ်လေ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်တဲ့ အခါ …. ကြာ ကြာခင်မင်မှုမရှိပဲ ရှောင်ပြေးတာက များတယ်လေ …. ။ ချက်တင်ဆိုတာမျိုးကလည်း … သူ့စိတ်ကိုယ်မမြင်နိုင် ကိုယ့်စိတ်သူမမြင်နိုင်တဲ့ ဆက်သွယ်မှု တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် …. လွဲမှားစွာ အသုံးပြု သူတွေကြားမှာ … ရည်းစားရှာသူ ၊ ဖွန်ကြောင်သူတွေလည်း ပါလာခဲ့တာပေါ့ … ။ အင်တာနက်ထဲမှာတွေ့လို့ … အပြင်မှာပါ ချစ်ကြိုက် …လက်ထပ်ယူသွားတဲ့လူရှိသလို … အင်တာနက်ထဲမှာ အယောင်ဆောင်ပြီး အပြင်မှာပါ ကာမရယူဖို့ ကြိုးစားတာတွေလည်းရှိတာမို့ … အရှက်တကွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေလည်း ကြားဖူးခဲ့ပါတယ် …. အပြောကောင်းတဲ့လူတွေကြောင့် အင်တာနက်ထဲကနေ … အပြင်မှာပါ ငြိလာကြတဲ့ အတွဲတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ … ။ ကျွန်မကတော့ ..အင်တာနက်ထဲက ချစ်သူဆိုတာ အယုံအကြည်မရှိပါဘူး … ။
အင်တာနက်ရေစီးကြောင်းမြင့်မားလာမှုနဲ့အတူ ချက်တင်ကိစ္စဟာလည်း ထပ်တူ ထပ်မျှ သုံးစွဲသူများလာခဲ့တယ် … ။ဒါကြောင့်လည်း လူငယ်တွေကြားမှာ အင်တာနက်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ … ချက်တင်လုပ်တာပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ဝင်နေခဲ့ကြတာလေ … ။ တခြား ဗဟုသုတရမယ့် ဝက်ဖ်ဆိုက်တွေ ၊ လေ့လာစရာတွေရှိပါလျှက် …. ချက်တင်လောက် ပေါ်ပြူလာ မဖြစ်ခဲ့ဘူး … ။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေ ၊သူငယ်ချင်းတွေ ၊ မိသားစုနဲ့ ပြောချင်မှာချင်တာအတွက် သုံးသလို ရုံးလုပ်ငန်းတွေ မြန်ဆန်စောလျှင်စွာပြီးဖို့အတွက်လည်း ချက်တင်က အကူညီပေးပါသေးတယ် …. ။
ဟိုလျှောက်လုပ် ၊ ဒီလျှောက်လုပ်ရင်း … အင်တာနက်ထဲရောက်လာမိတဲ့ ကျွန်မက အန်းတားနှိပ်လိုက်လို့ … တဖက်က စာတက်လာလျှင် ပျော်နေတတ်တဲ့ …. နယူစာ ဘဝတုန်းက … ချက်တင်လုပ်ရတာ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတစ်ခုလိုပဲ သတ်မှတ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ …. ။ ဘုဆတ်ဆတ် ကြွတ်ဆတ်ဆတ် စိတ်မရှည်တတ်ပေမယ့် ….. ချက်တင်လုပ်ဖို့ … တက်လိုက် ကျလိုက် ကော်နက်ရှင်ကို စိတ်ရှည် သည်းခံစွာ စောင့်တတ်ခဲ့သေးတယ် ။ အင်တာနက် နယူးယူဆာ ဘဝတုန်းက ပုံမှန် ချက်တင်ပြောခဲ့တဲ့ လူ လေးငါးယောက်ထဲ တစ်ချို့တစ်လေ အနှောင့်သွားမလွတ်တဲ့လူတွေ ပါတတ်ပြန်တယ် …. ။ မိန်းကလေး နာမည်နဲ့အကောင့် …၊ယောကျာ်းလေး နာမည်နဲ့ အကောင့် … စသည်ဖြင့် ကြည့်ပြီး အ ထီးအမခွဲကာ ချက်တင်လုပ်ခဲ့မိပါသေးတယ် …. ။ နားမလည်တာမေးလို့ရသလို ကိုယ်သိထားတာလေး ရှဲလို့ရတဲ့အတွက် သဘောကျခဲ့တယ် … ဒါပေမယ့် အရာရာမှာ သံသယများတတ်တဲ့ ကျွန်မက အမြဲလိုလို စိတ်ဓါတ်အမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမျိုးနဲ့ ယုံမှားသံသယတော့ စိတ်ထဲအမြဲရှိခဲ့ဖူးတယ် … ။ မကြူတာကလွဲလို့ …. ချက်တင်ကို ပျော်ပျော်ကြီးသုံးဖူးခဲ့တယ်လေ …. ။ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေဆို ယခုအချိန်ထိ ငယ်ပေါင်းတွေလို ပြောမနာဆိုမနာ … အကူညီလိုလျှင် တောင်းတုန်း ၊ အကြံလိုလျှင်ပေးတုန်းပဲလေ … ။
ကံဆိုးစွာနဲ့ စေတနာ မမှန်တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဖူးခဲ့တယ် ….. ။ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ရဲ့ …. chat room ထဲကနေ သိပြီး …. ဂျီမေးလ်ထဲ အက်ခဲ့တဲ့လူပေါ့ … ။ နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ သူက စကားဆန်းဆန်းတွေပြောတတ်သလို …တစ်ခါတစ်လေ .. ကိုယ်မရောက်ဖူးတယ် …သူ့ရဲ့ ဇာတိနယ်မြို့လေးအကြောင်း ၊ မိဘဆွေမျိုးတွေကြားက ပြသနာလေးတွေကိုပါ … ရင်ဖွင့်တတ်ခဲ့တယ် …. ။ ကျွန်မက အကြံလည်း မပေးတတ် ၊ ဝေဖန်ရလောက်အောင်လည်း မရင့်ကျက် ၊ မနှိုးလည်း မနှိုးဆော်တတ်ပေမယ့် … နားတော့ထောင်တတ်ပြီး … ရေလိုက်ငါးလိုက် ပြန်ပဲ ပြောတတ်တာကြောင့် … သူပြောသမျှ နားထောင်ပေးမယ့်လူ ဖြစ်လာခဲ့တယ် …. ။ လူများကို လွယ်လွယ်နဲ့ အယုံကြည်မရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ် ရာခိုင်နှုန်းများများ ကျွန်မစိတ်ထဲ ကြီစိုးနေတာမို့ … ကျွန်မနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စ အနည်းကျဉ်းသာ သူသိခွင့်ရခဲ့တယ်လေ … ။ နယ်ခြား မြေခြားမှာ အလုပ်လုပ်သူဖြစ်တာကြောင့် … အပြင်မှာချိန်းစရာကိစ္စလည်းမရှိ … မတွေ့ချင်လျှင် မပြောချင်လျှင် တစ်ခုတည်းသော ဆက်သွယ်မှုဖြစ်တဲ့ ချက်တင်ကိုပိတ်ထားလိုက်လျှင် အလွယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် …. သုံးနှစ်လောက်ကြာကြာထိ … မေးထူးခေါ်ပြော လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် … ။
မမျှော်လင့်တဲ့တစ်နေ့ ….. ကျွန်မဆီ ဖုန်းဆက်တော့မှ …. ရန်ကုန်ရောက်နေပြီသိခဲ့ရတယ် …. ။ ရုံးကိစ္စနဲ့ ပြန်လာတာဖြစ်ပြီး … ဘုရားဖူးထွက်ချင်ကြောင်းပြောပြန်တယ် … ။ ဘုရားဖူးတောင် ရန်ကုန်မြို့ထဲက ရွှေတိဂုံတို့ … ဆူးလေတို့ …. ဗိုလ်တထောင်တို့ မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ …. အညာဘုရားဖူးကိုပဲ ထွက်ချင်ပါတယ်ပြောရော …. ။ အင်တာနက်ထဲက မိတ်ဆွေ အပြင်ကိုရောက်လာတော့လည်း …. ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အဆင်မပြေတာရှိလျှင် ကူညီပေးဖို့ ဆန္ဒရှိတာကြောင့် … သွားဖို့ လာဖို့ … ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ package အစီစဉ်တွေ ညှိပေးမယ်ပြောလိုက်မိသေးတယ် … ။ ဒါကို ဘာထင်သွားမှန်းမသိပဲ … ကျွန်မကိုပါ အညာဘုရားဖူးလိုက်ဖို့ခေါ်ရော …. ။ ကျွန်မသာ သူ့နေရာမှာဆိုလျှင် …. ခေါ်မိမှာ မဟုတ်ဘူး …. ။ တစိမ်းမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ခရီးအတူသွားမည်ဆိုတဲလူက ……. ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ လူမျိုး ဆိုတာ … ပြေးကြည့်တာထက် တွေးကြည့်ရုံသိနိုင်တယ်လေ … ။ ကျွန်မလည်း … အတော် စိတ်တိုသွားပြီး … တစ်နေရာမှာ ချိန်း … ကောင်းကောင်း ကို ရန်တွေ့ပစ်လိုက်တယ် … ။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မ ချက်တင်လစ်ထဲက သူ့အကောင့်ကို အပြီး del လုပ်လိုက်ပါတော့တယ် … ။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး … သူဆိုတာလည်း … ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ် … ။
ကိုယ်ကျင့်တရား ၊စိတ်ဓါတ်တွေ ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့အချိန် သတိထားပြီး နေပါလျှက်နဲ့ …. ဒီလို အမေးခံရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း … အနေထိုင်မတတ်ခဲ့ပါလားဆိုပြီး ဒေါသထွက်မိတာ အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ … ဒီထက်ဆိုးတာက … ဒီလောက်စကားပြောနေတာ သုံးနှစ်လောက်ကို သူ့စိတ်က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မရိပ်စားမိတာကြောင့် ဝမ်းနည်းရတာပါပဲ … ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရမ်း စိတ်နာမိတယ်လေ …. သူပြောသမျှ ရေလိုက်ငါးလိုက် … နားထောင် တွေးတောပေးတတ်ခဲ့တဲ့ … အ ချိန်တွေ အလဟာသ ဖြုန်းခဲ့မိပြီး…. နောက်ဆုံးတော့ မကျေနပ်တဲ့ ဒေါသအစိုင်ခဲတွေနဲ့ … ဇာတ်သိမ်းလိုက်ရတာကြောင့်ပါ … ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပါးရေ နပ်ရေ ရှိလှပြီ … ကိုယ့်ဘော်ဒါထဲ ဒီလို စိတ်ဓါတ်မမှန်တဲ့လူမပါဘူး ယုံကြည်ခဲ့ရာက .. … စိန်ကဲ ရွှေကဲထက် လူကဲခတ်ရ ခက်တယ်ဆိုတဲ့ စကား မှန်ကန်နေပြီလို့ လက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ် …. ။ တစ်ခါသေဖူး … ပျဉ်ဖိုးနားလည်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်မအဖြစ်က တွေ ့ကရာလူတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံ ချက်တင်လုပ်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ပေးခဲ့တယ် ….. ။ သူများအကြောင်း တစိုက်မတ်မတ် နားထောင်ပေးတဲ့ အချိန်ဖြုန်းခြင်းတွေကိုလည်း မလုပ်မိတော့ပါဘူး …. ။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ချက်တင်ထဲက ကောင်းကျိုးခံစားရခြင်း (ရွဲ့ရေးတာ) ပါပဲ … ။
သုံးတတ်လျှင်ဆေး … မသုံးတတ်လျှင် ဘေးဆိုသလိုပါပဲ … ။ အင်တာနက်ထဲကနေ ဆိုရှယ် ဝက်ဖ်ဆိုက်တွေကနေ …သူငယ်ချင်းတွေရလာခဲ့ပြန်တယ် …. ။ ဂျီတော့ခ်ကနေတဆင့် … ချက်တင်လုပ်ရင်း …. ရိုးသားတဲ့စိတ်အရင်းခံတွေ မြင်ရတာကနေ … အရင်အဖြစ်ပျက်ကို မေ့ပြီး ခင်သွားမိတော့တယ် …. ။ပြောဆိုနေရာက…ဝါသနာသိပြီး .. စာရေးတာ ဝါသနာ ပါကြတဲ့ လူအချင်းချင်း စုစည်းမိပြီူး တစ်ခါတစ်ခါ … လျှပ်တပြတ်ဆုံဖြစ်ကြသေးတယ် … ။ စေတနာမမှန်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ တွေ့ခဲ့ဖူးပေမယ် ့… အခုကြုံဆုံလာရတဲ့ …ဘော်ဒါတွေကတော့ ..အသက်ရွယ် အတွေးခေါ်ပိုင်းခြားရော စုံကြပေမယ့် ..စာရေးတဲ့ဝါသနာတူတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာ ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုများလားပဲ … ။ ဟန်ဆောင်မှုမပါတဲ့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်တဲ့ လူတွေကလည်း မုန့် လုပ်ကျွေး တဲ့လူတွေရှိသလို … တကူးတက …. သစ်သီးတွေ စားဖို့ ယူလာပေးတဲ့ လူတွေလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ် … ။ ကားကြုံလိုက်ဖို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ခဲ့ဖူးသလို …. ထိုင်စရာနေရာမရှိလို့ ထိုင်ခုံတွေ ကူညီသယ်မပေးသူနဲ့လည်း ဆုံခဲ့ဖူးတယ် … ။ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ့တွေ ရိုက်တတ်တဲ့ လူနဲ့ ခင်ခဲ့ဖူးသလို …. ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်တတ်တဲ့ လူ ၊ ပြောရဲဆိုရဲပြီး အနေအေးတဲ့ လူတွေနဲ့လည်း ဆုံခဲ့ဖူးတယ် …. ။အရောင်သွေးစုံလင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိသူတွေကြားထဲ …. ဝါသနာတူ အုပ်စုလေးစုရှိနေခဲ့တာကို အင်တာနက်ထဲက ရခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်လို့ပဲ တင်စား လိုက်ချင်ပါတော့တယ် ….
ဘော်ဒါတို့အားလုံးလည်း …. ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ကံကောင်းစွာ…ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ …. ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် ။
အရိုးခံစိတ် ဖြူစင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရှိတယ်အိတုံရေ တွေ့ဘူး တယ် အန်မတန်ဆိုးတဲ့ ဂျီတော့သူနဲ့ ခုထိဖလီးနေရတယ်(သေလို့ရတယ်)ဖေ့ဘုက်အတင်းတောင်း တခါမှတွေ့ဘူးပေါင်ဗျာ အပြင်မှာတွေ့ဘူးရင်လဲထားတော့(မှားပါတယ်)
ွGtalk နဲ့ပတ်သတ်ရင်တော့ ပြောစရာဘာမှမရှိဘူး မိုးစက်က စကားပြောမကောင်းဘူး
friend list ထဲမှာ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေပဲရှိတယ်
face book မှာလည်းအတူတူပဲ အဝေးရောက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
အကြောင်းအရာတွေ ဓာတ်ပုံတွေ share ကြ၊ စကြနောက်ကြတာပဲရှိတယ်
မသိတဲ့ id ဆိုရင်လုံးဝ accept မလုပ်ဘူး
အဲဒီတုံးကစာပဲရိုက်တာနော်ဒါတောင်မြန်မာစာကခုမှရိုက်တတ်တာ အင်တာနက်သုံးတာက၁၂ရီးယားအိုဗာလေအခုဂျီမေးပဲထားတယ် ဂျီတော့ဆို မသုံးတာနှစ်နဲ့ကြာပေါ့(ဆလံမာလေးကွန်း)ပဲ
အရင်ကတော့ chatting ဆိုရင်လာထားပဲ အသေအလဲကို ချက်တာပေါ့
တကယ်ခင်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိသလို အီစီကလီလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့
သွေးတိုးစမ်းတဲ့ သူတွေလဲရှိတယ် ကြာတော့ chatting ဆိုတာကြီးကို ငြီးငွေ့လာတယ်
ဘာမှအရေမရ အဖတ်မရတွေပြောနေရသလိုပဲ ဒါနဲ့အခုတော့ Gtalk မှာဆို သိတဲ့သူပဲ လက်ခံဖြစ်တာများတယ် မသိတဲ့သူဆို လက်ကို မခံတော့တာ အခုတော့ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖြစ်နေတာ
MG ပဲဖြစ်နေတော့ Facebook ကိုတောင် သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ အထိပါပဲ ….
ကိုယ့်ဝါသနာနဲ့ကိုယ်ပဲဆိုတော့…ပြောတတ်ပါဝူး
ချက်တင်မှာခံရပေါင်းများလို့ ချက်တင်ကလူဆို “အင်း”“ဟုတ်လား”“ဒါပေါ့”“ကောင်းပါတယ်”
ကျုပ်ရုံးမှာတော့ “ချက်ကြီး” နဲ့ “ချက်မ” နှစ်ယောက်ရှိတယ်
အကောင့်ငါးခုလောက်တော့ ဟန်မပျက်တစ်ပြိုင်တည်း ပြန်ပြောနိုင်တယ် အံရောဗျာ…။။။
ရတန်းကျောင်းသူ ကောင်မလေး နဲ့ပထမနှစ် ၂ခါကျထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး တို ့ဟာ
ကောင်မလေး ဘုရားပွဲမှာ ပထမဆုံး စဆုံဖူး၊တွေ ့ဖူးသွားခဲ့ကြပြီး ထပ်မဆုံဖြစ်ကြတော့ဘူးတဲ့ ။
နောင် ရ နှစ်အကြာမှာ ကောင်မလေးလဲ ကျောင်းပြီးလို ့အလုပ်တွေ ဘာတွေ လုပ် ရင်း ရုံးကနေ အင်တာနက် သုံး ။ ကောင်လေး က လဲ ကျောင်းမပြီးခဲ့ပေမယ့် ၊ အပြင်မှာ တခြားစီးပွားရေးတွေ နဲ ့အင်တာနက်သုံး ၊ ဖေ့ဘုတ် ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ် ဝက်ဆိုက်ကြီးမှာ ကောင်လေးနဲ ့ကောင်မလေး ဟာ ပြန်ဆုံတွေ ့ကြပြီး အချစ်ကြီး ချစ်သွားကြကာ ညားသွားကြပါသတဲ့ ကွယ် ။
တော်ရုံတန်ရုံ ဖူးစာ မဟုတ်ဘူးနော် … ဘယ်နယ့်ဟိုကောင်လေး ကလေးကို သွားကြံနေတာတုန်း .. အလယ်တန်းအရွယ်ကလေးကို .. ဟွန်း
ဟိုသွားဒီသွား သွားတတ်တဲ့လူတွေကို ကြည့်ပြီး အားကျစရာပါပဲလား အီတုံးရေ။
မောင်ပေရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတိ္တဖြစ်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်ဖူးစာအကြောင်းကိုတော့ ပိုစ့်တင်ပြီး ကြေငြာမောင်းခတ်တန်ကောင်းပါရဲ့
ဒါနဲ့မအိတုံ Gtalk အကောင့်လေးပေးပါလား
gtalk account လေးကတော့ …. etone.mandalaygazette@gmail.com ပါကွယ် … တနှစ်ကို တကြိမ်တောင် ဖွင့်မကြည့်တဲ့ အကောင့်လေးပါ … ဟဲဟဲ …
ဂေဇက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ …. ဝင်တဲ့စာတွေအကုန်လုံးကို fwd လုပ်ထားတယ် ….
ဟိုက ဘာတွေ အရေးတကြီး ပြောစရာရှိနေလဲမှ မသိဒါ
ဟိုးးးးးးးးးးးတနေ့ကတောင် ကောင်မလေးတယောက် လာအပ်သေးတယ် ကောင်မလေးက ရိုးသားမယ်ထင်လို့ လက်ခံ လိုက်ပါတယ်…………..ခုခောတ်က မိန်းခလေးဆိုတိုင်းလဲ မယုံရဲဘူးလေ…..:)
တချို့ကောင်မလေးတွေကလည်း … ရိုးသားပါတယ် တညင်သားရေ … ။ အီစီကလီလေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး … တကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ ပေ့ါင်းကြတာပါ ဟဲဟဲ
ဂျီတော့ခ်ထဲက သူငယ်ချင်း ဂျီတော့ခ်ထဲမှာခင်တာပဲကောင်းပါတယ်
ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ပေါ့
ဟုတ်တယ် … ဂျီတော့ထဲက သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဂျီတော့ထဲမှာပဲ ထားခဲ့သင့်တာ …. ။ ဒါဆို ကိုယ့်ကို ထိခိုက်မှု ဘာမှ မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ … ။
အင်းဟုတ်ပဗျာ မအိတုံပြောလဲပြောချင်စရာပါပဲ.. အခု တက်သစ်စ လူငယ်လေးတွေက အင်တာနက်ကို အဲလို မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေကြတာ ပါ.. ကျွန်တော် စာသင်တဲ့ ကလေးတွေကိုလဲ စာစသင်ရင် ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ. သင်တာလဲ လို.မေးရင် တစ်ချို.က ပြောနိုင်တယ် တစ်ချို.က မပြောနိုင်ဘူး.. အင်တာနက် အသုံးပြုနည်းသင်တန်းတွေတက်လဲ ချက်တင်လောက်ကလဲ ဘာမှတတ်မလာဘူး.. အင်တာနက်မှာ အသုံးလိုတဲ့ ပညာရပ်တွေ အများကြီးရှိတယ် search engine တွေများ သုံးစမ်းပါဘိ ဗျာ..
အင်တာနက်များ သုံးတတ်လို.ကတော့ တကယ့်အသုံးတဲ့တဲ့ အရာကြီးပါ.. ချက်တင်မထိုင်နဲ.လို.မပြောပါဘူး ကျွန်တော်တို.လဲ သုံးတာပဲ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း စတာနောက်တာ information share တာတွေ လုပ်တာပေါ့.. သတိနဲ.တော့ သုံးကြပေါ့ဗျာ..